July 2016 - Ibsaa Jireenyaa
Tawbaa- Balbala Jijjiramaa fi Gammachuu-Kutaa 1ffaa
July 23, 2016 Sammubani Leave a comment
Akkuma kutaale darban keessatti jenne daandiin haqaa lama ta’uu hin danda’u tokko qofa malee. Daandiin haqaa tokko ta’uun namatti dhiphachuun namoonni muraasni kan irra deeman osoo hin ta’iin daandii bal’aa dhala namaa guutu keessumeessu danda’uudha. Daandiin kuni nama kamuuf kan ta’uufi kan gahuudha. Daandiin haqaa kuni bal’achuu qofaa mitii ifaa fi qajeelummaan kan guuttameedha. Nama of balleessu fi kufaati mataa ofi irratti fidu barbaade malee eenyullee daandii kan irraa hin goru. Read more
Daandiin haqaa kami laata- kutaa 2ffaa
July 16, 2016 Sammubani Leave a comment
Torbaan darbee keessa daandiin haqaa maal akka ta’ee fi warroota daandii haqaa irra fagaatan addeessuuf yaalle turre. Daandiin haqaa karaa tokkicha ilmi namaa badii fi adabbii adda addaa irraa baraaramuun nageenya, gammachuu fi milkaa’inna dhugaa galmaan itti gahuudha. Daandiin haqaa karaa ifaa fi qajeela ta’ee kan dukkanni fi jallinni keessa hin jirreedha. Daandiin haqaa rakkoo ilma namaatif furmaata guutu kan qabuudha. Kanaafu daandiin haqaa kamiin akka ta’e hubachuuf faaydaa armaan olii kan irraa argannu yookiin isa keessatti kan argamu ta’uu qaba. Read more